Mianatra Mamboly Holatra Hivelomany ireo Siriana Any amin’ny Tanàna Iray Tratry Ny Fahirano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2017 16:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, عربي, Ελληνικά, Português, русский, Nederlands, Français, čeština , Deutsch, 繁體中文, English
Pikantsary avy aminà lahatsary iray natao ho fanentanana. Loharano: CanDoAction
Hatramin'ny nanombohan'ny revolisiona Siriana tamin'ny 2011 sy ny ady an-trano naterany, marobe ireo tanàna manerana an'i Siria no nahatsapa ho niharan-doza vokatry ny fahirano henjana sy ny tsy firaharahiana, indrindra fa ny ataon'ireo tafika miara-dia amin'ny fitondràn'i Assad.
Araka ny voalazan'ny Siege Watch, (Fanarahamaso ny Fahirano), hetsika iray fikatsahana fandriampahalemana, iarahan'ny fikambanana PAX sy ny Ivontoerana fikarohana The Syria Institute, dia misy eo amin'ny 1 tapitrisa eo ireo siriana amin'izao fotoana izao no miaina ny fahirano any amin'ireo faritra ao Damaskaosy, ambanivohitr'i Damaskaosy, Homs, Deir Ezzor, ary ny fari-piadidian'i Idlib.
Faritra iray isan'ny tena mizaka ny tsy eran'ny ainy ny ao Ghouta Atsinanana, toerana nisianà fanafihana simika taminìny 21 Aogositra 2013, ary nahafatesana sivily an-jatony maro. Maro ireo governemanta, fikambanana iraisampirenena, ary ireo Siriana mpanohitra no mamintina — niainga avy amin'ireo fanadihadiana nataon'ny Firenena Mikambana sy ireo vondrona maro mpiaro zon'olombelona — hoe ny fitondràn'i Assad no nanatontosa ilay fandripahana.
Efa hatramin'ny 2013 no niaina fahirano ity ampahany amin'i Siria eo ambany fifehezan'ny mpihoko ity, mahatonga ireo mponina hiantehitra amin'ny sakafo vokarina avy ao an-toerana na hita eny amin'ny varomaizina na mandalo an'ireo toerana fisavàna.
Nahatonga ireo olontsotra tsy hahatakatra ireo sakafo nahazatra azy intsony, toy ny hena, ireo taona marobe nisian'ny fahirano ataon'ny fitondràna. Ho setrin'izay dia mampianatra ireo mponina any Ghouta Atsinanana mba hamboly holatra ho an'ny filàn'izy ireo ny vondrona iray ahitàna ireo Siriana mpiahy ny maha-olona sy ireo nahita fianarana ambony, mba ho toy “ny loharanon-tsakafo ho avotr'aina.”
Mitonona ho Ghiras Al Nahda izy ireo ary iarahany mandrindra amin'ny fikambanana iray tsy miankina ao an-toerana, antsoina hoe Adala Foundation, ilay tetikasa.
Tsy isan'ireo voly mahazatra ao Siria ny holatra, ary zara raha hita amin'ny hainahandro ao an-toerana, saingy ireo tombontsoa azo avy aminy dia nahatonga azy ireny ho loharanon-tsakafo nahasarika ny maro ao amin'ny tanànan'i Ghouta Atsinanana tratry ny fahirano.
Abu Nabil, talen'ilay tetikasa, nilaza tamin'ny masoivohom-baovao AFP:
Nitodika tamin'ny fambolena holatra izahay satria sakafo iray manana lanja avo ara-tsakafo izy ireny, mitovy amin'ny hena, ary afaka ny hovolena any anaty trano sy lozoka / lakavy.
Raha niresaka tamin'ny Global Voices ny iray amin'ireo mpandrindra, Dr. Ahmed Leila, dia niteny fa nitolona mafy ry zareo mba hahafantaran'ny olona ity tetikasa ity tamin'ny telo taona lasa, ary naneho fa afaka enta-mavesatra rehefa “teraka ihany ilay izy nony farany”.
Nampiasain'izy ireo ilay sehatra fanangonana vola ho an'ny resaka maha-olona CanDo, niarahany tamin'ilay ONG Ghiras Al-Nahda, mba hanangonana vola ho an'ny hetsik'izy ireo. Nambaran'i Dr. Leila tamin'ny Global Voices fa fianakaviana 125 no tetehan-dry zareo ho ampianarina hamboly holatra.
Tamin'ny fotoana nanoratana, efa tratran'izy ireo 100% ny tanjona nokendreny, teo amin'ny 14.800 dolara amerikàna, saingy mbola hanohy handray fanomezana ao amin'ny CanDo ry zareo hatramin'ny Alatsinainy 4 Septambra 2017.
Miankina amin'ny fisian'ireo vondrom-pihary herinaratra ity fandraisana andraikitra ity mba hitazonana ny maripàna tsy hiova eo amin'ny 25 degre ary ny hamandoan'ny rivotra ho 802%. Noho ny tsy fahampian'ny solika, dia ahodina amin'ny alàlan'ny loharanon'angovo vokarina ao an-toerana ireny vondrom-pihary ireny, izay azo avy amin'ny plastika.
Nambaran'i Dr. Leila tamin'ny Global Voices fa nanomboka tamin'ny “famokarana masomboly ry zareo, avy amin'ireo holatra maniry amin'ny fomba natoraly ao amin'ny faritra” talohan'ny nandinihany azy ireny sy naminavinàny ny zavatra entiny ary ny kalitaony sy ny mampety ny mihinana azy.
Avy eo ry zareo nanangana toerana fambolena holatra tanaty fitaovana fandroana (baignore), ary rehefa nety, dia nikisaka nankaminà baignore lehibe kokoa hatrany, dia toy izany foana. Ankehitriny, “nanamboatra toerana fambolena sady fiofànana ho an'ilay faritra” ry zareo.
Hatramin'ny nanombohan'ity tetikasa ity, ary nandritry ny telo volana, nizara holatra nanerana an'i Ghouta Atsinanana ry zareo, nozaraina maimaimpoana.
Nohazavain'i Dr. Leila fa ampahany amin'ny hetsika iray midadasika be ho fampianarana izy io. “Miasa izahay mampianatra ny vahoaka ny fomba famboly holatra noho ny antony marobe”:
1- Fandravàna ny fahirano.
2- Fanomezana sakafo iray vaovao ho an'ny tsena.
3- Fanapariahana ny fambolena velontena amin'ny fakàna tombony avy amin'ireo fakon-javatra tao an-tokantrano (toy ny taratasy, ny dite, ny kafe, ny baoritra, sns) ka mamadika azy ho sakafo.
4- Fampiasàna hery mpamokatra misimisy kokoa, indrindra fa ny vehivavy miasa ao an-tokantrano.
5- Fampiasàna ireo izay manana filàna manokana voafefifefy ao an-tokantranony.
Nampiany hoe antenain-dry zareo ny “hanaparitaka ity hevitra ity manerana izao tontolo izao mba ho fantatr'izy ireny ny fahombiazana azonay, hatramin'ny tolonay manohitra ny hanoanana sy ny fahirano. Tianay ny zavatra iainanay mba ho aingam-panahy hanosika ireo faritra hafa misedra fahasahirànana, araka izany dia mba afaka manampy ny zanak'olombelona izahay.”
Teo ambany fitarihan'i Joey Ayoub ny tafa niarahana tamin'i Dr. Ahmed Leila ary fandikana nataon'i Elias Abou Jaoude.